Ciidamada Itoobiya oo xasuuq ka gaystay gobolka Tigray - Warar Sugan - Soomaaliya iyo caalamka
HomeWararkaCiidamada Itoobiya oo xasuuq ka gaystay gobolka Tigray
Hay’adda xuquuqul aadanaha ee Amnesty International ayaa war bixin ay soo saartay ku sheegtay shalay in ciidamada dowladda dhexe ee Itoobiya ay xasuuq ba’an ka gaysteen gobolka Tigray ee uu dagaalku ka socdo.
Amnesty waxay sheegtay in boqolaal qof oo shacab ah la bireeyey qaarna hilibkooda la jarjaray loona gaystay xasuuq isir sifays ah. Amnesty waxay dowladda Itoobiya ugu baaqday in la soo celiyo adeegii internetka oo maalmihii ugu dambeeyey ka maqnaa gobolka Tigray si loola socda xasuuqa halkaasi ka dhacaya.
Agaasime goboleedka Amnesty Deporose Muchena ayaa Addis Ababa ugu baaqay in ay baaris degdeg ah ku samayso xasuuqa loo gaystay shacabka Tiray.
Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa isna bartiisa facebook ku sheegay in ay ciidamada Itoobiya xoreeyeen dhulka buuraleyda ah ee galbeedka dalkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada Tigray.
Dowladda dhexe ee Itoobiya waxay gebi ahaanba ka soo horjeesatay in ay wadahadal la gasho maamulka tigray waxaana maalmihii ugu dambeeyey caasimadda itoobiya lagu xirxriay boqolaal qof oo la sheegay in ay damacsanaayeen in ay qalalaaso ka sameeyaan caasimadda oo ay la shaqaynayaan maamulka Tigray.